प्रदेशी को पीडा सोचे जस्तो छैन रमाउन अबस्य पढनुहोस
पुरुस को पीडा हरेक नारी ले अबस्य पढनै पर्ने मन छुने प्रदेशिएका को पीडा मन पर्यो भने अबस्य एक सियर गर्नुहोला । हामी धेरै जस्तो नारी को पीडा मात्रै सुन्ने गरेका छौ । हरेक कुरा हाम्रो दिनहु कान मा पर्छ । हो थाहा छ सबै लाई नारी पीडा मा छ । पीडा मा रोएको देखेका छौ । तर एक पटक मैले जानेको र बुझेको कुरा हामी पुरुस को पीडा लाई बाहिर ल्याउन खोजेको भन्दा पनि मैले जे जति जानेको हो । त्यही कुरा लेखेको मात्रै हो ।
महिना भरी काम गरेर आफ्नो शरीर लाई ख्याल नगरी रात दिन दिन आफ्नो परिवार सम्झेर सुक्का रोटि र पानी पिएर आफ्नो भोक मेटाएर काम गरेका पुरुस लाखौ छन खाडी मुलुक मा तर पनि आफ्नो पीडा बाहिर ल्याउने कहिलै खोज्दैन । कस्ले देखेको छ ? त्यो पीडा जुन नेपाल मा बसेर महिना सकिदा साथ पैसा पैसा मात्रै भन्छन । कस्ले देखेको छ ? 55 डिग्री को घाम मा काम गरेर राम्रो शीत खाना नखाएर आनन्द मन लिएर बसेको । महिना मर्न हुदैन अनि आउँछ मोबाइल मा कल र मेसेन्जर मा मेसेज ! भाइ भन्छ । ल्यापटप चाहियो । श्रीमती भन्न थाल्छे मोबाइल र गहना चाहियो ।
बाबा भन्न थाल्नुहुन्छ एउटा राम्रो टि भि चाहियो । बहिनी भन्छे । मोबाइल मा रिजार्च र हातमा घडी चाहियो । अरु के के हुन के के । सबै आफन्त लाई कुनै न कुनै चिचको डिमान्ड गरेकै हुन्छन तर आमाले मात्रै एस्तो भन्नुहुन्छ । बाबू तँ सन्चै छस ? तैले खाना खाईस कहिले घर आउने ? सबै कुरा लाई लिएर अनि पीडा लुकाएर मीठो स्वर मा सबै जना लाई पालैपालो हुन्छ भनेर त्यो आवाज दिन खोज्दा आँखा रखाएको कस्ले देख्छ ?
हो तेई हो पुरुस को पीडा । जुन आफू रोएर पनि आफ्नो परिवार लाई खुसी दिने महान पुरुस को पीडा कहिलै देखिदैन । सत्य कुरा महिनौ पैसा कमाएर आफ्नो श्रीमती लाई पठाए को केही दिन मै आफ्नि श्रीमती अर्कै शीत गएको कुरा सुन्दा कस्ले देख्छ त्यो बेला को पिडा ? हो एहि हो पुरुस को पीडा । मन परे सियर गर्नुहोला ।
सभामुख सापकोटा भन्छन, संविधान जनताका मूलभूत भावनालाई समेट्न सफल भयो ।